Minetek | Ukwehliswa kwe-Acoustic
Umshini Ukutholwa kwe-Acoustic
Ukuncishiswa Komsindo Osebenzayo, Ukulawula kanye Nokukhansela
IMinetek ithathwa njengomunye wabahlinzeki abahamba phambili emhlabeni wonke kwezobunjiniyela, ukuklama, ukukhiqiza kanye nokwenza izixazululo ezizwakalayo zezimayini nemishini yezimboni. Ngeminyaka engaphezu kwengu-50 yokuhlangenwe nakho okuhloliwe, sakha izixazululo ezizwakalayo zokunciphisa umsindo ukufeza ibanga elithule kakhulu lomshini onikeziwe ukuze uqhubeke nokusebenza ngokunethezeka ngaphakathi kwemithetho yezinga lomsindo.
Imayini Yomshini We-Acoustic Attenuation
UMinetek ungumholi womhlaba wonke ekukhiqizeni imishini yezimayini ethule kunazo zonke emhlabeni. Ngokunciphisa umsindo wezimboni kanye nokuncishiswa kwemishini yezimayini, ochwepheshe bethu ezixazululweni ezizwakalayo bahambela isiza sakho ukuze kuhlolwe indawo yakho inkinga yakho bese beqhubeka nokwakha uhlelo olwanele lwezenzo zokuqinisekisa kamuva ukufakwa kwezitifiketi kanye nokufakwa kwamaphakeji aziwayo okunciphisa umsindo kaMinetek.
Amaphakeji we-modular acoustic kaMinetek enzelwe izinhlobo eziningi zemishini yezimayini futhi kulula ukufakwa emhlabeni jikelele ngenxa yokuhamba kwawo.
Sinikezela ngemininingwane ezimele eqinisekisiwe yeyunithi ngayinye ethengisiwe.
Ubunjiniyela Bamandla kagesi
Isebenza kahle kakhulu, amaphakheji wethu wokunciphisa umsindo atholakala kalula kubahlinzeki nabasebenzi.
Amaphakeji wemisindo kaMinetek enzelwe ubuchwepheshe ukugcina noma ukukhuphula ukuhamba komoya ngenkathi kufezekiswa izidingo zomsindo ezifunwayo. Ngolwazi lwethu olubanzi ezimbonini zezimayini nezokumbiwa phansi, iMinetek iyaqhubeka nokuklama amaphakheji wokunciphisa umsindo asebenza kahle afinyelela ukufinyelela ko-opharetha nabasebenzi bezokulungisa ngenkathi bekhuluma ngemikhawulo ezingeni ngalinye ukuqinisekisa ukuthobela. Sinikezela ngemininingwane yomsindo eqinisekisiwe yayo yonke imishini evivinywayo.
Ithimba lethu lamazwe omhlaba liyatholakala ukuze lifakwe noma yikuphi.
IMinetek igcina amahhovisi emhlabeni wonke ukuze ithimba lethu elinolwazi likwazi ukuya kalula kusayithi lenkampani yakho ukuthola isitifiketi nokufakwa kwamaphakeji wethu wokunciphisa umsindo nezixazululo ezifakazelwe.